राजेन्द्र महतोको प्रश्न : महाकाली सन्धि पारित गर्दा लिपुलेक कहाँ थियो ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/राजेन्द्र महतोको प्रश्न : महाकाली सन्धि पारित गर्दा लिपुलेक कहाँ थियो ?
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धि पारित गर्दा लिपुलेक कहाँ थियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै महतोले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले सन्धि पारित हुँदा नक्सा स्पष्ट गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने बताएका छन्।
‘राष्ट्रघातीको अब पहिचान गर्नुपर्छ। राष्ट्रघातीलाई झुन्डाउनुपर्छ। राष्ट्रवादको परीक्षा अब मधेसमा नगर्नुस् । मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्‍ने ?’, महतोले भने महाकाली सन्धि गर्दा लिपुलेक कहाँ थियो ?उनले नक्सा बनाएर वा पारित गरेर मात्र नहुने प्रष्ट पारे । ‘जमिन चाहियो । प्रधानमन्‍त्रीले अब भूमि दिनुपर्‍यो नेपाली जनतालाई’, उनले भने ।
नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन पारित हुँदै (लाइभ)
सरिता गिरीको प्रस्ताव खारेज
राजतन्‍त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो : प्रचण्ड
नक्सा पारितपछि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाऊ : कांग्रेस
राष्ट्रिय अखण्डताका लागि सबै नेपाली एक हुन्छन् : देउवा
नेता महतोले नक्सा मात्र नभएर भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउने प्रस्ताव ल्याउनु भयो, हामीले सर्वदलीय बैठककमा भन्यौ नक्सा मात्रै होइन, भूमी पनि फिर्ता लिन पहल गर्नुहोस्’, महतोले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमी हो, त्यसैले अनुसुची संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश भएको हो। मधेसीले राष्ट्रियताका कुरा गर्छ ? भनेर सोधिन्छ तर राष्ट्रियता एकल हुन्न, सबैको हुन्छ। मधेसी जनताले सीमाको रक्षा गरेका छन्, सेना पुलिस जानु पर्दैन ।’